24 Zvino Abrahamu akanga akwegura, ava nemakore mazhinji; uye Jehovha akanga akomborera Abrahamu pazvinhu zvose.+ 2 Nokudaro Abrahamu akati kumushandi wake, mukuru weimba yake, akanga achitarisira zvose zvaaiva nazvo:+ “Ndapota, isa ruoko rwako pasi pechidya changu,+ 3 zvandichaita kuti upike naJehovha,+ Mwari wematenga naMwari wenyika, kuti hauzotoreri mwanakomana wangu mudzimai pavanasikana vevaKenani vandiri kugara pakati pavo,+ 4 asi uchaenda kunyika yangu nokuhama dzangu,+ unotorera mwanakomana wangu Isaka, mudzimai.” 5 Asi mushandi wacho akati kwaari: “Ko kana mukadzi wacho asingadi kuuya neni kunyika ino? Ndinofanira kudzorera mwanakomana wenyu kunyika yamakabva here?”+ 6 Abrahamu akati kwaari: “Chenjerera kuti usadzorera mwanakomana wangu ikoko.+ 7 Jehovha Mwari wematenga, uyo akandibvisa paimba yababa vangu nepanyika yehama dzangu,+ uyo akataura neni uye akandipikira,+ achiti, ‘Ndichapa mwana* wako+ nyika ino,’+ achatuma ngirozi yake pamberi pako,+ uye uchatorera mwanakomana wangu mudzimai ikoko.+ 8 Asi kana mukadzi wacho asingadi kuuya newe, iwewo uchave wasununguka pakundipikira kwawaita.+ Asi usadzorera mwanakomana wangu ikoko.” 9 Mushandi wacho akaisa ruoko rwake pasi pechidya chaAbrahamu tenzi wake akamupikira pamusoro penyaya iyi.+ 10 Naizvozvo mushandi wacho akatora ngamera gumi pangamera dzatenzi wake, akaenda aine zvinhu zvakanaka zvemarudzi ose zvatenzi wake muruoko rwake.+ Akabva asimuka, akaenda kuMesopotamiya kuguta raNahori. 11 Akazoita kuti ngamera dzipfugame kunze kweguta patsime remvura panenge panguva yemanheru,+ panenge panguva yaiwanzobuda vakadzi vanochera mvura.+ 12 Akati: “Jehovha Mwari watenzi wangu Abrahamu,+ ndapota, itai kuti zviitike pamberi pangu nhasi uye itirai tenzi wangu Abrahamu mutsa worudo.+ 13 Tarirai ndakamira patsime remvura, uye vanasikana vevanhu veguta vari kubuda kuzochera mvura.+ 14 Zvino musikana wandichati, ‘Ndapota, tura chirongo chako chemvura, kuti ndinwe,’ uye achati, ‘Inwai, uye ndichanwisawo ngamera dzenyu,’ iyeyu ndiye wamuchapa mushumiri wenyu,+ Isaka; uye itai kuti ndizive kuti maitira tenzi wangu rudo rwakavimbika neizvi.”+ 15 Zvino, asati apedza kutaura,+ Ribheka akanga achiuya, akanga aberekerwa Bhetueri+ mwanakomana waMirika+ mudzimai waNahori,+ mukoma waAbrahamu, uye chirongo chake chemvura chakanga chiri papfudzi rake.+ 16 Zvino musikana wacho akanga ane chitarisiko chakanaka kwazvo,+ ari mhandara, hapana murume akanga amborara naye;+ akadzika kutsime akazadza chirongo chake chemvura akabva akwira. 17 Pakarepo mushandi wacho akamhanya kunosangana naye akati: “Ndapota, ndipewo mvura shomanana muchirongo chako ndinwe.”+ 18 Iye akatiwo: “Inwai, ishe wangu.” Naizvozvo akakurumidza kuturira chirongo chake paruoko rwake akamunwisa.+ 19 Paakanga apedza kumunwisa, akabva ati: “Ndichachererawo ngamera dzenyu mvura kusvikira dzaguta.”+ 20 Naizvozvo akakurumidza kudurura mvura yaiva muchirongo chake muchinwiro akaramba achimhanya kutsime kunochera mvura,+ uye akaramba achicherera ngamera dzake dzose. 21 Panguva yose iyi murume wacho akanga akanyatsomutarira achishamisika, achiramba akanyarara kuti azive kana Jehovha akanga aita kuti rwendo rwake rubudirire kana kuti kwete.+ 22 Naizvozvo ngamera padzakanga dzapedza kunwa, murume wacho akabva atora rin’i yepamhino+ yakagadzirwa nendarama yairema hafu yeshekeri nezvishongo+ zviviri zvokuisa mumaoko ake, zvairema mashekeri gumi endarama, 23 akati: “Uri mwanasikana waani? Ndapota, ndiudze. Kumba kwababa vako kune nzvimbo yokuti tirare here?”+ 24 Iye akati kwaari: “Ndiri mwanasikana waBhetueri+ mwanakomana waMirika, waakaberekera Nahori.”+ 25 Akatizve kwaari: “Kune uswa nezvokudya zvezvipfuwo zvizhinji zvatinazvo, uyewo nzvimbo yokurara.”+ 26 Murume wacho akakotama, akagwadama pamberi paJehovha+ 27 akati: “Jehovha Mwari watenzi wangu Abrahamu ngaarumbidzwe,+ asina kurega kuitira tenzi wangu mutsa worudo nokuvimbika. Ini ndiri munzira, Jehovha anditungamirira kuimba yehama dzatenzi wangu.”+ 28 Zvino musikana wacho akamhanya, akanoudza imba yaamai vake nezvezvinhu izvi. 29 Zvino Ribheka akanga ane hanzvadzi yainzi Rabhani.+ Naizvozvo Rabhani akamhanyira kumurume uya akanga ari kunze patsime. 30 Paakaona rin’i yepamhino nezvishongo+ zvemaoko zviri pamaoko ehanzvadzi yake uye paakanzwa mashoko aRibheka hanzvadzi yake, achiti: “Murume wacho ataura neni zvokuti nezvokuti,” akabva aenda kumurume wacho uye tarira akanga aripo, akamira pedyo nengamera patsime. 31 Akabva ati: “Uya, iwe wakakomborerwa waJehovha.+ Unorambirei wakamira kunze kuno, nepo ini ndagadzira imba nenzvimbo yengamera?” 32 Naizvozvo murume wacho akapinda mumba, akasunungura ngamera, akapa ngamera dzacho uswa nezvokudya nemvura yokuti ageze tsoka dzake netsoka dzevarume vaaiva navo.+ 33 Zvokudya zvakabva zvaiswa pamberi pake, asi akati: “Handingadyi kusvikira ndataura nezvenyaya dzangu.” Nokudaro akati: “Taura!”+ 34 Akabva ati: “Ndiri mushandi waAbrahamu.+ 35 Jehovha akomborera tenzi wangu zvikuru kwazvo zvokuti anoramba achimuita mukuru, achimupa makwai nemombe nesirivha nendarama nevashandirume nevashandikadzi nengamera nembongoro.+ 36 Sara mudzimai watenzi wangu akaberekerawo tenzi wangu mwanakomana achembera;+ uye achamupa zvose zvaanazvo.+ 37 Naizvozvo tenzi wangu akaita kuti ndipike, achiti, ‘Usatorera mwanakomana wangu mudzimai pavanasikana vevaKenani vane nyika yandiri kugara.+ 38 Aiwa, asi uende kuimba yababa vangu nokumhuri yangu+ unotorera mwanakomana wangu mudzimai.’+ 39 Asi ndakati kuna tenzi wangu, ‘Ko kana mukadzi wacho akasauya neni?’+ 40 Akabva ati kwandiri, ‘Jehovha, wandakafamba pamberi pake,+ achatuma ngirozi+ yake ichaenda newe uye achaita kuti rwendo rwako rubudirire;+ utorere mwanakomana wangu mudzimai kumhuri yangu nokuimba yababa vangu.+ 41 Panguva iyoyo uchasunungurwa pane zvaunosungirwa kuti undiitire nemhiko paunosvika kumhuri yangu, uye kana vakasakupa iye, uchabva wasunungurwa pane zvaunosungirwa kundiitira nemhiko.’+ 42 “Pandasvika patsime nhasi, ndabva ndati, ‘Jehovha Mwari watenzi wangu Abrahamu, chokwadi kana muri kuita kuti rwendo rwangu rwandiri kufamba rubudirire,+ 43 tarirai ndakamira patsime remvura. Ngazviitike kuti musikana+ achabuda kuzochera mvura wandichati: “Ndapota, rega ndinwe mvura shomanana muchirongo chako,” 44 uye uyo achati kwandiri: “Inwai mose, uye ndichachererawo ngamera dzenyu mvura,” ndiye mukadzi apiwa mwanakomana watenzi wangu naJehovha.’+ 45 “Ndisati ndapedza kutaura+ mumwoyo mangu,+ chokwadi, ndaona Ribheka achiuya, ane chirongo chake papfudzi rake; akadzika kutsime, akachera mvura.+ Ndabva ndati kwaari, ‘Ndapota, ndipewo mvura yokunwa.’+ 46 Naizvozvo akurumidza kutura chirongo chake akati, ‘Inwai,+ uye ndichanwisawo ngamera dzenyu.’ Ndabva ndanwa, uye anwisawo ngamera dzacho. 47 Pashure paizvozvo ndamubvunza kuti, ‘Uri mwanasikana waani?’+ iye akati, ‘Mwanasikana waBhetueri mwanakomana waNahori, waakaberekerwa naMirika.’ Naizvozvo ndaisa rin’i yepamhino pamhino yake nezvishongo zvemaoko pamaoko ake.+ 48 Ndakotama, ndikagwadama pamberi paJehovha ndikarumbidza Jehovha Mwari watenzi wangu Abrahamu,+ anditungamirira panzira yakarurama+ kuti nditore mwanasikana wehama yatenzi wangu nokuda kwomwanakomana wake. 49 Zvino kana muri kuitira tenzi wangu mutsa worudo nokuvimbika,+ ndiudzei; asi kana musiri, ndiudzei, kuti nditsaukire kurudyi kana kuruboshwe.”+ 50 Rabhani naBhetueri vakabva vapindura kuti: “Chinhu ichi chabva kuna Jehovha.+ Hatigoni kukutaurira zvakaipa kana zvakanaka.+ 51 Tarira Ribheka ari pamberi pako. Mutore uende, ngaave mudzimai womwanakomana watenzi wako, sezvataurwa naJehovha.”+ 52 Mushandi waAbrahamu paakanga anzwa mashoko avo, akabva agwadama pamberi paJehovha.+ 53 Mushandi wacho akatanga kubudisa zvinhu zvesirivha nezvinhu zvendarama nenguo akazvipa Ribheka; akapa hanzvadzi yake naamai vake zvinhu zvakanaka kwazvo.+ 54 Pashure paizvozvo vakadya, vakanwa, iye nevarume vaaiva navo, vakarara ipapo, vakamuka mangwanani. Akabva ati: “Ndiregei ndiende kuna tenzi wangu.”+ 55 Hanzvadzi yake naamai vake vakati: “Musikana wacho ngaagare nesu mazuva gumi zvawo. Pashure angaenda hake.” 56 Asi akati kwavari: “Musandinonotsa, Jehovha zvaaita kuti rwendo rwangu rubudirire.+ Ndiregei ndiende, kuti ndiende kuna tenzi wangu.”+ 57 Naizvozvo vakati: “Ngatishevedze musikana wacho tinzwe zvaanotaura.”+ 58 Vakabva vashevedza Ribheka, vakati kwaari: “Uchaenda nomurume uyu here?” Iye akati: “Ndinoda kuenda.”+ 59 Vakarega Ribheka+ hanzvadzi yavo nomureri+ wake nomushandi waAbrahamu nevarume vake vachienda. 60 Vakatanga kukomborera Ribheka vakati kwaari: “Haiwa iwe, hanzvadzi yedu, iva zviuru zvemakumi ezviuru, vana vako ngavave varidzi vegedhi revaya vanovavenga.”+ 61 Pashure paizvozvo Ribheka nevashandikadzi vake+ vakasimuka, vakatasva ngamera+ vachitevera murume wacho; uye mushandi wacho akatora Ribheka akaenda. 62 Zvino Isaka akanga abva nenzira inoenda kuBheeri-rahai-roi,+ nokuti akanga achigara munyika yeNegebhu.+ 63 Isaka akanga ari kunze achifamba kuti afungisise+ ari kusango panenge panguva yemanheru. Paakasimudza maziso ake akatarira, akaona nechekoko ngamera dzakanga dzichiuya! 64 Ribheka paakatarira, akaona Isaka, akaburuka pangamera. 65 Akabva ati kumushandi wacho: “Murume uyo ari kufamba uko musango kuzosangana nesu ndiani?” mushandi wacho akati: “Nditenzi wangu.” Zvino akatora jira romumusoro akazvifukidza.+ 66 Mushandi wacho akatsanangurira Isaka zvinhu zvose zvaakanga aita. 67 Pashure paizvozvo Isaka akamupinza mutende raSara amai vake.+ Nokudaro akatora Ribheka, akava mudzimai wake;+ akamuda,+ uye Isaka akanyaradzwa pashure pokushayikirwa naamai vake.+
^ Ge 24:7 Kureva, “mbeu.”